Alshabaab oo qof Shacab ah ku gowracay Waajid | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Alshabaab oo qof Shacab ah ku gowracay Waajid
Alshabaab oo qof Shacab ah ku gowracay Waajid
Muqdisho(SONNA) Maleeshiyaad ka tirsan Al-shabaab ayaa xalay, qof rayid ah waxaa ay ku gowraceen deegaanka Celeemow oo qiyaastii 22-KM u jira degmada Waajid ee gobolka Bakool, sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Ninka Al-shabaab ay dileen ayaa la oran jirey allah u naxariistee, Xasan Cali Maad Caalin, oo kamid ahaa dadka deegaankaas, waxaana uu kamid ahaa afar nin oo waday gaari dameero raashiin saaran yahay oo ku sii jeeday degmada Waajid.
Sadexdii kale ee la socotay ayaa la sheegay in ay ka baxsadeen ayagoo cagahooda maalaya, guddoomiye ku xigeenka maamulka degmada Waajid, Caddow C/raxmaan Jugle, ayaa sheegay in ninka la gowracay iyo kuwa kale ee la socday lagu beegsaday oo kali ah in ay raashiinka ay u wadeen Waajid maadaama Al-shabaab ay go’doomiyeen.
Guddoomiye ku xigeenka, ayaa intaa ku daray in sadexdii nin ee Al-shabaab ka soo baxsatay ay gaareen degmada Waajid.
Dhowr jeer oo hore, ayay sidan oo kale Al-shabab dad shacab ah ku dileen deegaanka iyadoo raashiin Waajid ku sii jeeda ku gubeen.
Caddow C/raxmaan Jugle, guddoomiye ku xigeenka maamulka degmada Waajid ayaa sidoo kale sheegay in raashiinkii raggan ay wateen ay deb qabadsiiyeen Al-shabaab isla markaana dileen dameeradii raashiinka saarnaa.
Previous articleRa’iisul Wasaare Khayre oo kulan la qaatay guddiga dib u eegista Dastuurka+(SAWIRRO)
Next articleGuddiga amniga ee golaha shacabka oo la kulmay wasiirka amniga gudaha